IHuawei yenye yeempawu ezisebenzisa kakhulu i-R & D emhlabeni | I-Androidsis
Isamsung kunye neHuawei ziimpawu ezichitha uninzi kwiR & D
Uphando kunye nophuhliso zibalulekile kwiinkampani zetekhnoloji okwangoku, nakwabavelisi beefowuni. Iimpawu ezinje ngeSamsung kunye neHuawei ngumzekelo olungileyo, kunye nophuhliso lweefowuni ezisongelayo njengeGold Fold kunye neMate X eza kufika kungekudala. Ngoku, idatha emalunga neenkampani eziphezulu ezichitha imali kwi-R & D ityhiliwe, kukho isimanga kuyo.
Kuba kunokwenzeka ukuba wazi ukuba ii-brand zithanda Isamsung kunye neHuawei zabela uhlahlo-lwabiwo mali ngaphezulu koku kunabanye abanjengoApple. Okubaluleke ngokukodwa kukukhula kwegama laseTshayina, into ethe yakhokelela kwintengiso elungileyo, sele idlulile iApple ngokusemthethweni.
Le datha ipapashwe yiBloomberg. Ngokwala manani, IHuawei yabele i-R & D ye-15,3 yezigidigidi zeedola kulo nyaka uphelileyo. Eli nani liphindwe kabini kule nkampani etyale imali kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Ke inyuke ngokubonakalayo kwisithuba esifutshane sexesha. Into enemvelaphi yayo kutyalo-mali lwayo kwi-5G, into ngaphandle kweengxaki.
Ngale ndlela, ngedatha yeminyaka yakutshanje, uphawu sele luzimisile njenge inkampani yesixhenxe kwicandelo lobuchwepheshe otyale imali kakhulu. Kancinci kancinci isondela kwinqanaba lezinye iinkampani ezinje ngeSamsung. Ukongeza kwi-Apple esele idlulile, into engathandabuzekiyo eyenza ukuba kucace amandla enkampani.
Ngapha koko, iHuawei Yanda kancinci kancinci kwamanye amacandelo. Kuba kulindeleke ukuba kubekho isithethi esilumkileyo sebrendi, oko kuya kuthetha ukungena kwaso kwicandelo lasekhaya. Kodwa ngokuqinisekileyo siza kubona ukuba iimveliso zifika njani kwiindawo ezintsha, ezinceda ukuqhubela phambili kwazo.
Siza kubona ukuba utyalomali lwenkampani lukhula njani. Kwintsimi yomnxeba, Iifowuni ze-5G kunye neefowuni ezinokusonga zizinto ezimbini zamandla aphambili IHuawei namhlanje. Ngokuqinisekileyo siya kubona ukuba zininzi kangakanani izinto ezintsha kule ndawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Isamsung kunye neHuawei ziimpawu ezichitha uninzi kwiR & D
I-HTC iyeke ukuthengisa iifowuni e-China